လျှောက်လွှာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာကို process နိုင်မီ, သင် programming ကို Pre-စမ်းသပ်ရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျာဗား, C ++, C # သည်, သို့မဟုတ် C. ကြည့်ရှု: သင်အောက်ပါဘာသာစကားများတဦးတည်းအတွက်ကုဒ်ရေးသားဖို့လိုအပ်သည်ဒီရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုများအတွက် နမူနာစမ်းသပ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုယူဖို့ဘယ်လိုပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအဘို့သင့်ကနဦးအရည်အချင်းများကိုအတည်ပြုကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့ထံသို့စေလွှတ်အီးမေးလ်ထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် (အကြောင်းအရာ: ။ အဆင့် 1a mum MSCS ကနဦးအတည်ပြုချက်)
ရှိသမျှသည်အခြားသော entry ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေမယ့် oriented programming နဲ့အရာဝတ္ထု၏လက်ရှိအသိပညာချို့တဲ့နေသောလျှောက်ထား (ဦး) software ကိုနည်းလမ်းများအဆိုပါအကြို Track ရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကျောင်းသားများဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကာလအတွင်းပြီးစီးရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်သောဤအကြောင်းအရာများအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံများအတွက်အစားထိုးမဟုတ်ပါ။
အကြှနျုပျတို့သညျထို Programming Pre-စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးသောသင်အကြောင်းကြားပြီးနောက်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အီးမေးလ်ဖြင့်ပစ္စည်းများကိုတင်သွင်း ကျေးဇူးပြု. သို့ intadmis11@mum.edu.
သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများစကင်ဖတ်သူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦး JPG သို့မဟုတ် PDF ဖိုင်ဖန်တီးပါ။ အားလုံး scan ဖတ်စာရွက်စာတမ်းများအဘို့အ JPG သို့မဟုတ် PDF ဖိုင် format ကိုသုံးပါ။
အဆိုပါ ပြန်စသည် နှင့် သင်တန်းအမှတ်စဥ်ဖျေါပွခကျြသင်ထောက်ကူစာရွက် Microsoft Word ကိုဖိုင်တွေအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူရပါမည်။
.zip file ကိုပို့မနေပါနဲ့။ ကပစ္စည်းတချို့ scan လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါလျှင်, သင် 641-470-1378 ထိုစာရွက်စာတမ်းများဖက်စ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, အီးမေးလ်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ post ရန်အဘို့အ 4-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းခွင့်ပြုပေးပါ။
ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ပစ္စည်းများ 1-4 လက်ခံရရှိသည့်အခါ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသင် Programming Pre-Test ကိုလွန်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိပြီးနောက်ဒီတော့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပေးပို့ပါ, သင့် status တွေအကြောင်းသင့်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်:
1 ။ ပြန်စသည်
အဆိုပါအညီအသစ်တခုကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပွငျဆငျပေးပါ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် template ကို။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှာဖော်ပြထားတဲ့မည်သည့် programming ကိုအတှေ့အကွုံလာသောအခါအဘယ်မှာသင် programming ကို ပြု. , အရာကိုသင်အသုံးပြုသောအစီအစဉ်များအဖြစ်အသေးစိတ်ကိုပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ အထက်ပါညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသစ်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကို (သို့မဟုတ်အခြားစာသားကို) file ကိုအီးမေးလ်ပို့။
2 ။ တရားဝင်မှူးများနှင့်ဒီပလိုမာ၏စကင်
ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကောလိပ်များ, တက္ကသိုလ်များ, သင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ပြီအသိအမှတ်ပြုဌာနအနေဖြင့်မည်သည့်ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှု Scan မှတ်တမ်းဗားရှင်း (အမှတ်အသားစာရွက်များ) နှင့်ဒီပလိုမာ (ကျောင်းဆင်းပွဲသို့မဟုတ်ဒီဂရီဆုလက်မှတ်များ) Send ။ သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတျပါလျှင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ပါဝင်သည်ပေးပါ။ ရရှိနိုင်လျှင်လည်း, အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာပါဝင်သည်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းအဆိုပါသင်တန်းဖျေါပွခကျြသင်ထောက်ကူစာရွက် (အောက်တွင်အမှတ်3ကိုကြည့်ပါ) ကလိုက်ပါသွားရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ scan ဖတ်မှတ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးလျင်မြန်စွာသင်လျှောက်လွှာကို process မှခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏မှတ်တမ်းများ၏မူရင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ (အောက်တွင်အမှတ်5ကြည့်ရှုပါ။ )
3 ။ သင်တန်းအမှတ်စဥ်ဖျေါပွခကျြသင်ထောက်ကူစာရွက်
ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ပုံစံတစ်ခု Microsoft Word ကိုဗားရှင်းအဘို့။ ပုံစံအပေါ်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အဖြေကိုရိုက်ထည့်နှင့်သင်၏အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံအီးမေးလ်ပို့ပါ။ PDF ဖိုင်ဗားရှင်း.
အဆိုပါသင်ထောက်ကူပြီးပါကများအတွက်လမ်းညွန်ပုံစံအပေါ်ပေးအပ်ထားတယ်။ မှတ်ချက်: သင်ကဒီသင်ထောက်ကူဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်မှတ်တမ်းကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
4 ။ Professional က Programming, အတွေ့အကြုံများ Form ကို
5 ။ သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကနေတိုက်ရိုက် Sent ရုံးမှူး
သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါလိမ့်မယ်အရာ (အထကျဖျောပွထား) scan ဖတ်မှတ်တမ်းအပြင်, သငျသညျတက်ရောက်ခဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုတံဆိပ်ခတ်တရားဝင်မိတ္တူပေးပို့တောင်းဆိုပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့တင်သွင်းသည့် Scan စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြု. သင်၏လျှောက်လွှာကို process ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်, ငါတို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကနေတိုက်ရိုက်တံဆိပ်ခတ်အရာရှိတဦးကမှတ်တမ်းခံယူသည်အထိနောက်ဆုံးလက်ခံမှုနှင့်ဗီဇာစာရွက်စာတမ်းများ (ပုံစံ I-20) ပို့နိုင်မဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ စာတိုက်မေးလ်အားဖြင့်မှတ်တမ်းများ၏သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ္တူပေးပို့မဟုတ်ပါဘူးပါ။ Faxed မှတ်တမ်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင့်ရဲ့ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ရှိ ကျေးဇူးပြု. စာပို့ အဆိုပါမှတ်တမ်းမှ:
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်SM အဆင့်လက်ခံရေး, မှူး
ID ကို # ___(သင့်ရိုက်ထည့်ပါ ComPro ID ကို # ဤနေရာတွင်)___
1000 N ကို 4th စိန့်
ဖဲရ်ဖီးလ်အိုဝါ 52557, အမေရိကန်နိုင်ငံ
သငျသညျပုံမှန်စာတိုက်လကွောငျးစာပို့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. စေသောနှစ်ခုမှသုံးရက်သတ္တပတ်နှောင့်နှေးမယ့် entry ကိုများအတွက်အချိန်အတွက်ဗီဇာလျှောက်ထားရန်သင့်စွမ်းရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ကြလိမ့်မည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အထူးဆက်သားအားဖြင့်မှတ်တမ်းပေးပို့တောင်းဆိုချင်ပေမည်။
6 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် Form ကို
အဆိုပါပေါ်မှာရှိသမျှမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် Form ကိုအဆိုပါပေးပို့အချက်အလက် button ကိုနှိပ်ပြီးတော့အက်ဆေးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်ဤမျှငါတို့သည်သင်တို့အပလီကေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်စိတ်ဝင်စားသိရရှိစေခြင်းငှါဒါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပုံစံတင်ပြပေးပါ။
7 ။ စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်ရမှတ်နှင့် IT Certificate
အိန္ဒိယနှင့်အီရန်ထံမှလျှောက်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တက်ရောက်ရန်ပါ GRE ယူရန်လိုအပ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်လျှောက်ထားမှုအတွက်ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ယူမှသူတို့ကိုအားပေးပေမယ့်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး GRE ရမှတ်သင်ကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်ပမာဏကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ပါ GRE ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။
အဆိုပါဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ (GRE - အဖွဲ့အစည်းကုဒ် 4497) အတွက်ရမှတ်များတင်ပြရန်တစ်နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများ (TOEFL), သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဆန်း, Cisco သည်ဖြစ်စေ, IBM ကအဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှကနေပရိုဂရမ်းမင်း / OOP အတွက်မဆိုအိုင်တီအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်၏စမ်းသပ်မှုသည်အီးမေးလ်ပို့ပါ scan ဖတ်လက်မှတ်များမှ intadmis11@mum.edu (တစ်ခုတည်းသော JPG format ကိုသုံးပါ။ .zip file မပို့ပါနဲ့။ )
8 ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံနှင့်အထောက်အထားစာမျက်နှာ၏မိတ္တူ
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပါဝင်နေမူသောသင်တို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏စာမျက်နှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူမရှိဘဲသင်၏လျှောက်လွှာများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦး Form ကိုငါ-20 ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှေ့မှာလက်ခံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
9 ။ ထောက်ခံချက်
သင်တို့အဘို့ထောက်ခံချက်တင်ပြရန် (သင်ကောလိပ်၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်ရုံကောလိပ်ကျောင်းပြီးစီးပါပြီလျှင်) (သင်လက်ရှိအလုပ်နေကြသည်လျှင်) သင့်ရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးကိုမေး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပါမောက္ခပေးပါ။ အဆိုပါထောက်ခံချက်ကြိုတင်သင့်ရဲ့ကျောင်းအပ်၏ယနေ့အထိ6လအတွင်းထက်မပိုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစပြီးစီးခဲ့စေခြင်းငှါ ဒီမှာ။ တစ်ဦးကစာဖြင့်ရေးသားထောက်ခံချက်ကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး, 641-470-1378 မှ faxed နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်း may အီးမေးလ်က တစ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေဗားရှင်း။
10 ။ လျှောက်လွှာကြေး (နောက်ဆုံးလက်ခံမှုပေးထားသည်အထိပေးဆောင်ခံရဖို့မပါ)
သင်၏နောက်ဆုံးလက်ခံမှုအီးမေးလ်အထုပ် / I-50 အထုပ်ကိုသင့်ထံအီးမေးလ်မပို့မီကွန်ပျူတာသိပ္ပံဝန်ဆောင်မှုများရုံးမှလက်ခံရရှိသောဒေါ်လာ ၅၀ ရှိသည်။ (မှတ်ချက်: သင်၏လက်ခံအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသည်တိုင်အောင်ဤငွေပေးချေမှုကိုမပို့ပါ!)
မှတ်ချက်: ကျနော်တို့ကြေးမရှိဘဲသင်၏လျှောက်လွှာကို process ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအပေါ်အခြားမေတ္တာရပ်ခံပစ္စည်းများပေးပို့နှင့်စခွေငျးငှါ သင်သည်သင်၏အဆင့်လက်ခံရေးကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့်လက်ခံအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အခကြေးငွေပေးပို့ဖို့စောင့်ပါ။
Credit Card ကို (ဗီဇာသို့မဟုတ်သာ MasterCard ကို) ။ သငျသညျ 641-470-1378 ဖို့သတင်းအချက်အလက် (ကဒ်နံပါတ်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်ကဒ်ပေါ်တွင်အမည်) ဖက်စ်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေစေခြင်းငှါ:
လျှောက်ထားသူ၏ ID ကိုနံပါတ်
ပိုက်ဆံအမိန့်, ဘဏ်မူကြမ်း, ငွေကိုင်ရဲ့စစ်ဆေးမှု - မှပေးဆောင်အမေရိကန်ရန်ပုံငွေအတွက် "စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်။ "
1000 မြောက်အမေရိက 4th လမ်း
သင့်ရဲ့ပါဝင်သည်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် အမည်, ID ကိုအရေအတွက်, မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲ, နှင့် အီးမေးလိပ်စာ.
သငျသညျပါကစ္စတန်နေထိုင်နေတယ်ဆိုရင် **: သူတို့တစ်တွေအမေရိကန် Affiliate ဘဏ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသကဲ့သို့ငါတို့မွတ်စ်လင် Commercial Bank ကနေဘဏ်မူကြမ်းကိုလက်ခံမပါဘူးသတိပြုပါ။
မေးခွန်းလွှာ? အီးမေးလ်လိပ်စာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးန်ထမ်းတဦး။